Talooyin Dhibaatooyinka u QuickTime Arrimaha Common ayaa g
Haddii aad raadinayso xal u QuickTime shilalka video, ma QuickTime dhawaaqa ama video, ama QuickTime dhibaatooyin video duubo, iwm, kaliya akhri maqaalkan si aad u hesho jawaabta. Wixii QuickTime fur-tago iyo in xal kale, riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
1. Error Fix: "movie Tani waxay u baahan QuickTime, taas oo aan la taageeray by version of this Lugood".
Fashilmay inuu ciyaaro QuickTime video in Lugood oo fariin kor ku xusan? Raadi sababta iyo xal halkan. Sababta: Lugood 10.4 ama ka dib on OS X Libaaxa furmay by default in hab 64-yara, halka qaar ka mid ah files ka weyn warbaahinta ordi karaan oo kaliya in hab 32-bit. Lugood weydiiyo QuickTime, maxaa yeelay, QuickTime kaliya waddaa in 32-yara hab. Xalka: Just raac talaabooyinka aan. Xir Lugood, guji Lugood icon galka codsiga in Finder ah, ka dibna hubi ikhtiyaarka, "Open in hab 32-yara" in Lugood.
2. QuickTime video ma laha dhawaaqa ama video
Si loo xaliyo dhibaatadaada, fadlan marka hore hubi in aad qabto ciyaaryahanka QuickTime dambeeyay lagu rakibay, iyo video jaanqaadi QuickTime, QuckTime taageerayaan Media qaabab . Markaas hesho xal hoose.
QuickTime fur-tago: Ku rakib Perian, Flip4Mac, ama cid kale oo ka siib-tago si aad u hesho codec QuickTime dheeraad ah ama qaab. Faahfaahin dheeraad ah QuickTime fur-tago .
QuickTime Converter: Isticmaal QuickTime Beddelaan si loogu badalo videos in la taageero by QuickTime.
QuickTime ciyaaryahan Alternative: Isku day ah ciyaaryahan kale oo QuickTime , sida VLC, MPlayerX, ama in ka badan.
Dib ama hoos QuickTime, dib QT cusub ee ku saabsan hogaanka hore u soo dajiyo, ama uun hoos QuickTime in version hore, tan iyo markii la sii daayo cusub ee QT laga yaabaa in la cayayaanka ama qaab ay taageerayaan iyo dhibaato codec soo.
Xayiran 3. QuickTime video in Chrome / Firefox / Safari
Si loo xaliyo shil QuickTime video ah, waxaad u baahan doontaa caawimo ciyaartoyda warbaahinta ama browser fur-tago. The QuickTime fur-tago, waayo, Chrome, Firefox ama Safari waxaa inta badan karti by default, aad awoodo kaliya firfircoon. Mise waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta, sida VLC, ama Wondershare Player, kuwaas oo diyaar u ciyaaro kasta video.
QuickTime ciyaaryahan iPad / iPhone / Android.
Xayiran 4. record screen QuickTime
Sadaam xayiran laga yaabaa QuickTime Marka aad dhamaysato qoro video ah. Si loo xaliyo dhibaatadaada, halkan waa 2 threads waxaad u tagi kartaa si ka Apple. Sida loo hagaajin duubay screen QuickTime xayiran Xaggee ku QuickTime video diiwaan kaydiyaa
5. Ma jiraa QuickTime 64 yara for Windows, ama QuickTime Player X for Windows ah?
I. Ma jiro 64 yara Windows OS version of QuickTime. Waxaa jira oo keliya version 32-yara ee QuickTime ah, laakiin waxaa la socon kara 64-yara Vista iyo Windows 7.
Si aad u soo bixi QuickTime daaqado 8 (64 Inyar), aad u hesho macluumaad dheeraad ah halkan .
II. QuickTime Player X waa kaliya diyaar u ah Mac. Wixii Windows, aad leedahay aad leedahay QuickTime Player (free) iyo QuickTime Pro.
Sida loo Beddelaan MP4 in QuickTime MOV
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in Mpg
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in FLV
Sida loo Beddelaan MKV in QuickTime MOV
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in M4V
Sida loo Beddelaan wmv in QuickTime in Windows ama Mac OS X Libaaxa
Sida loo Play Quicktime MOV 100% si guul leh (Yosemite ka mid ah)
Perian waa weynaada QuickTime!
3 Talooyinka QuickTime playlist aad u leeyihiin in ay ogaadaan
Xalliyo: 3 xaaladaha 'QuickTime aan shaqayn'
Sida loo rogo ama MTS in QuickTime Qaabka socon
QuickTime aan shaqaynayn OS X Mavericks?
Sida loo Guba QuickTime MOV in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > QuickTime > Dhibaatooyinka Talooyinka Arrimaha Common QuickTime